Shil gaari sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay inta u dhexeysa Qardho & Garoowe – SBC
Shil gaari sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay inta u dhexeysa Qardho & Garoowe
Posted by Webmaster on July 10, 2012 Comments
Ku dhowaad 6 qof oo labo ka mid ahi ay yihiin Caruur ayaa ku geeriyooday Shil gaari oo saaka aroornimadii hore ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Qardho iyo Garoowe.
Gaariga shilka galay islamarkaana ay ku geeriyoodeen dadkan 6da qof ah ayaa noociisu ahaa kuwa Xamuulka qaada gaar ahaan nooca ay Soomaalidu u taqaan Candhameydlaha iyadoona uu ka yimid dhanka iyo magaalada Boosaaso kuna sii jeeday magaalada Gaalkacyo .
Laamaha Amaanka wadooyinka ayaa u sheegay Xafiiska SBC ee Magaalada Qardho in dadkii ku waxyeeloobay shilkan gaar ahaan dadka ku dhaawacmay lookala qaaday goobaha caafimaad ee magaalooyinka Qardho iyo Garoowe.
Iyagoona Dusha u saariyay Masuuliyada shilalka ceyn kaan ah qibrad yari ku jirta wadayaasha gaadiidka, inkastoo aan si dhab ah loo xaqiijin karin sababta dhabta ah ee shilkani uu ku yimid.
Saraakiisha Caafimaadka isbitalka Qardho ayaa iyana xaqiijiyay in loo keenay dad dhaawac ah oo ay sidaan rayid ku soo jeeday gudaha Magaalada Qardho iyagoona sheegay in wadada ay kula kulmeen gaarigan dhacay islamarkaana ay indhahooda ku arkeen ku dhowaad 6 oo ku dhintay shilka, sida uu inoo xaqiijiyay C/raxmaan Siciid Aadan Agaasimaha gud ee Isbitalka Qardho.
Ma ahan shilkii ugu horeeyay oo ceynkan oo kale ah kaasi oo ka dhaca inta u dhexeysa magaalooyinka Qardho iyo Garoowe.
SBC International Qardho.